Yintoni enxiba iibhakethi?
Enye yeentlobo eziyinkimbinkimbi zeengubo kunye kunye nezinye izinto zii-breeches. Ngokuqhelekileyo kunzima ukukhetha kunye nokokugqoka iipakethi. Ukuba unako ngokuchanekileyo ukhetha ukudibanisa kwimpahla kunye nobude, ukulungele umzimba wakho - abayikugxininisa kuphela iifom zakho, kodwa bancede unike umfanekiso othakazelisayo. Kwaye ngexesha elifanayo uya kuziva ukhululekile. Kodwa amaxesha amaninzi amantombazana adibanisa neebhanti ngokukhawuleza izitayela ezininzi emfanekisweni wazo, kwaye zibukeka zibi kakhulu. Eli nqaku lithetha ngokudala imifanekiso emihle, apho iintlobo zamabhinqa eziphathekayo zidibaniswe ngokupheleleyo kunye nezinye izinto kwaye ziyingxenye yomfanekiso opheleleyo.
Iindidi ezahlukahlukeneyo zamabhanti
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeengubo. Okokuqala, ziyakwazi ukuhluka kwibala, isitayela nobude. Okokugqibela kukuchaphazela ukuba ngaba uya kugxininisa isidima sakho okanye ubonise ukungalungi. Ngoko ke, kufuneka uqaphele xa ukhetha ubude. Ukuba ukhetha iibhuleki zamadolo, oku kuya kubonakala kukunciphisa ubude bemilenze yakho, phakathi kwethole - izambatho zakho ziya kubonakala zikhulu kakhulu kwaye zininzi. Amabhuleki ahlanganisiweyo, afikelele emathambo, adala imilenze emincinci. Njengoko ubona, kunzima ukuqagela ngobude. Kodwa kusenokwenzeka.
Ngokuphathelele izitayela - ingaba sesikweni, ngokungaqhelekanga, okanye iibhenekethi zezemidlalo. Iyokuqala ihlanjululwa kwisitya sezimpahla, ezinika ubuhle kunye nokusemthethweni. Ngokuqhelekileyo ezi zinto zizolazo zithethi: ubumnyama obomvu, omnyama, obomdaka. Ngokuqhelekileyo, xa amabhinqa athengisa i-beige breeches, ayibonakali nje. Kodwa le nguqulo ifaneleke nekhati elimhlophe okanye le-beige. Unokudibanisa kunye nejacket okanye i-waistcoat. Ukuba ufuna ukufumana ulwazi olungakumbi lomfanekiso - khetha ihembe lemibala eyahlukileyo, umzekelo, obomvu okanye obuluhlaza. Kukho umbuzo omnye omnye - zeziphi izicathulo zokugqoka kunye neentsimbi? Kule meko, izihlangu zesikhephe okanye izicathulo eziphezulu zilungele.
Imifanekiso yonke imihla
Kwindlela yokuphila kwansuku zonke, zizithenge iipotton okanye i-breim breeches. Ukuba awukwazi ukuba ugqoke iibhakethi ezimhlophe, apha ungakhetha naluphi na uluhlu olukhazimulayo, ihempe okanye i-T-shirt. Ungesabi ukuzama, sebenzisa imibala eyahlukileyo kwaye wenze imifanekiso ecacileyo. Iibhenekethi zeedenim ziya kuba ziimpahla ezibalulekileyo kwiintsuku zasehlobo zaseburhulumenteni.
Ngokuqhelekileyo, amantombazana awaziyo ukuba agqoke iintambo zezemidlalo. Ngokuqhelekileyo banxibe imidlalo kwaye badibanise neejezi ezikhanyayo kunye neT-shirts, kunye nezinebe.
Isikriti kunye nezitya
Yintoni enxiba ngayo ingubo emfusa?
Yintoni enokugqoka i-blouse ebonakalayo?
Imibala ye-pastel - ithetha ukuthini, i-pastel shades kwindlela yamanje
Indlela yokugqoka amaqatha?
I-headpiece yengubo yeminki
Isitayela se Jazz
Isitayela seFransi - iimpahla
Iimfutshane kunye neT-shirt
Yintoni enxiba iibhoti ezibomvu ze-suede?
Yintoni enxiba ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka?
Yintoni enokugqoka i sweta ende?
Ukuziphatha kwamathambo emva kokunyanzelisa
Ukupakisha ukuhlobisa imisebenzi yangaphandle
Izipho ezinomdla kumadoda
I-Ascorbic - enhle kwaye embi
Ukuhamba kweScandinavian - njani ukuhamba?
Ukufungela abantwana ukuya kunyaka owodwa
Varenki kwi-boiler kabini
Yintoni eyancitshiswayo - inzuzo kunye nokungalunganga kwendlela
Ungayilahla njani inkosikazi yomyeni wakhe?
Imaski eyenziwe ngobumba ukuze ibhekane nobuso
I-Noel-Kempff-Mercado National Park
Iimitha zokuxhatshaza zokulala
Indoda-i-Virgo ibhinqa i-Scorpio-Ukuhambelana
Ukuphunyezwa kweminqweno ngamandla okucinga
Koloni kwi-sofa yekona
Izambatho ezibophekileyo, ezifashiniweyo ngo-2016
Zabrus - iimpawu zonyango, ukuthatha njani?
INkosana uHarry noMegan Markle bahamba ngomhla kwiikhamera zekhamera zixoshe